OTU ESI EGBOCHI ỌNỌDỤ IHI ỤRA NA KỌMPUTA GỊ - WINDOWS - 2019
Gbanyụọ mkpuchi na kọmputa Windows
Ọnọdụ ihi ụra bụ ihe bara ezigbo uru nke na-enye gị ohere ịchekwa ike ọkụ ma kwụọ batrị batrị. N'ezie, ọ bụ na kọmputa ndị a na-ebugharị na ọrụ a dị mkpa karịa ndị na-anọchi anya, ma na ụfọdụ ọ chọrọ ka ọ kwụsị. Ọ bụ otu esi ewepu ụra, anyị ga-agwa taa.
Gbanyụọ ọnọdụ ụra
Usoro maka ịkwụsị ọnọdụ ihi ụra na kọmputa na laptọọpụ na Windows anaghị akpata nsogbu, ma, na nke ọ bụla n'ime nsụgharị nke usoro sistemụ a, algorithm maka mmejuputa ya dị iche. Kedu otu, tụlee ọzọ.
Ihe niile dị na nsụgharị "top iri" mbụ nke sistemụ arụmọrụ mere "Ogwe njikwa"nwere ike ime ugbu a na "Ngalaba". Na ọnọdụ na nkwarụ nke ọnọdụ ihi ụra, ọnọdụ ahụ bụ otu - ị nwere ike ịhọrọ site na nhọrọ abụọ iji dozie nsogbu ahụ. Ị nwere ike ịmatakwu banyere ihe dị mkpa iji mee kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ iji kwụsị ịrahụ ụra site na otu isiokwu dị iche iche na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Gbanyụọ ụra na Windows 10
Na mgbakwunye na ịghachị ụra ozugbo, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịhazi ọrụ ya n'onwe gị site na ịkọ oge achọrọ maka oge ezumike ma ọ bụ omume ga-arụ ọrụ a. Eziokwu ahụ nke a chọrọ ime, anyị gwakwara ya n'otu isiokwu ọzọ.
Gụkwuo: Isetịpụ ma na-enyere ọnọdụ ụra na Windows 10
N'ihe banyere nhazi ya na njikwa ya, "asatọ" adịghị dị iche na nke iri nke Windows. Ma ọ dịkarịa ala, ịnwere ike wepụ ọnọdụ ihi ụra n'ime ya n'otu ụzọ ahụ ma site n'otu ngalaba - "Ogwe njikwa" ma "Nhọrọ". E nwekwara nhọrọ nke atọ nke na-egosi na ojiji nke "Iwu iwu" ma zubere maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ, ka ha na-enye njikwa zuru oke maka ọrụ nke sistemụ. Isiokwu na-esonụ ga-enyere gị aka ịmara ụzọ niile nwere ike isi kwụsị ọrụ ụra ma họrọ nke kachasị mma maka gị.
Gụkwuo: Gbanyụọ hibernation na Windows 8
N'adịghị ka "asatọ" nkeji, usoro nke asaa nke Windows ka na-adịkarị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. Ya mere, ajụjụ nke ịmepụ "mkpuchi" na gburugburu ebe nrụọrụ ọrụ a dịkwa oke mkpa maka ha. Iji dozie nsogbu nke taa na "asaa" ga-ekwe omume n'otu ụzọ, mana nwere nhọrọ atọ dị iche iche maka mmejuputa. Dị ka ọ dị na ikpe ndị gara aga, maka nkọwa zuru ezu anyị na-atụ aro iji mara ihe dị iche iche e bipụtara na weebụ anyị.
Gụkwuo: Gbanyụọ hibernation na Windows 7
Ọ bụrụ na ịnweghị ike igbochi kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ka ị ghara ihi ụra, ịnwere ike ịhazi ọrụ ya n'onwe gị. Dị ka ọ dị banyere "iri" ahụ, ọ ga-ekwe omume ịkọwa oge na omume ndị na-eme ka "mkpuchi".
Gụkwuo: Isetịpụ ọnọdụ ihi ụra na Windows 7
O di nwute, mkpuchi na Windows anaghị arụ ọrụ mgbe niile - kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nwere ike ma ọ bụ agaghị abanye n'ime ya mgbe oge a kapịrị ọnụ, na, ọzọ, jụ ịmeta mgbe achọrọ. Nsogbu ndị a, yana ụfọdụ nuances ndị ọzọ metụtara ụra, ndị na-ede akwụkwọ anyị kwurula na mbụ na isiokwu dị iche, anyị kwadoro ka ị gụọ ya.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa anaghị esi n'ọnọdụ ihi ụra apụta
Nsogbu nsogbu na ịhapụ ọnọdụ ụra na Windows 10
Iwepu kọmputa Windows site na ụra
Ịme ihe mgbe ị na-emechi mkpuchi laptọọpụ
Na-anabata ọnọdụ ụra na Windows 7
Nsogbu nsogbu nsogbu na Windows 10
Rịba ama: Ị nwere ike ịme ka ọnọdụ ọnọdụ ehi ụra mgbe ọ gbanyụrụ ya n'otu ụzọ ahụ ọ gbanyụrụ, n'agbanyeghị na a na-eji Windows eme ihe.
N'agbanyeghi uru nile nke ikpo ume maka kọmputa na karia laptọọpụ, mgbe ụfọdụ ị ka ga-agbanyụ ya. Ugbu a ị maara otú e si eme ya na ụdị ọ bụla nke Windows.